I-Inline helical gear reducer
i-inline helical gear minimators i-130mm flange, i-inline helical isivinini sokunciphisa i-gearbox, i-inline helical gearbox, i-motor motor inline gear minimers, i-inline gear minimers encane, i-gearbox ye-inline gear, i-inline gearbox
R uchungechunge i-helical gear reducer inezici zosayizi omncane, isisindo esincane, umthamo ophakeme wokuthwala, ukusebenza kahle okuphezulu, impilo yenkonzo ende, ukufakwa okulula, ububanzi bamandla ezimoto nokuhlukaniswa okuhle kwe-transmission ratio.Can ingasetshenziswa kabanzi kwimishini edinga ukwenziwa kwehlisiwe ezimbonini ezahlukahlukene. Lonke uhlelo lokusebenza lweTorque ephezulu luchaza ama-Inline Helical gear motors nama-inline reducers anikezwa ngokuncishiswa okukodwa, okuphindwe kabili nokokuhamba.
Ibanga lamandla: 0.12-200KW
Ububanzi bezilinganiso zokudlulisela: 1.3-33000
I-torque ekhishwayo (Kn.m): phezulu ku-50
Uhla lomkhiqizo: Izici zeVaritron Helical Gear Motor Reducers Drive ezinebanga eligcwele lokuklama. Ukusebenza kahle okuphezulu, igiya le-Helical, i-Inline, izinjini, i-ac, i-Foot Mount
(1) Amandla aphezulu wegeargethi elingana ne-SEW
(2) Kwehlisa amandla egiya eliphansi kufaka zombili isigaba nesigaba esisodwa
Amandla: phansi ku-0.3w, 0.12kw 0.18kw 0.25kw 0.37kw 0.55kw 0.75kw 1.1kw 1.5kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 250kw XNUMXkw XNUMXkw
Amandla wamahhashi: 0.2hp 0.25hp 0.35hp 0.5hp 0.75hp 1hp 1.5hp 2hp 3hp 4hp 5.5hp 7.5hp 10hp 12hp 15hpXNpXNp 20hp 25hp 30hp 350hp
Voltage: I-3v 6v 12v 24v 48v 90v 110v 115v 120v 200v 220v 230v 380v 400v 415v 660v njll.
I-1. I-R uchungechunge lwe-helical gear kunciphisa ukwakheka okunengqondo, ukwakhiwa kwe-compact, usayizi omncane kune-X noma B uchungechunge lwe-cycloidal gearmotor e-torque efanayo evunyelwe.
I-2. Ukudlidliza okuncane nomsindo ophansi, ngokusebenza kahle kokuhambisa okuphezulu.
I-3. Le mikhiqizo isetshenziswe kakhulu emishini yamakhemikhali, imishini ye-cement agitator, imishini yokuphrinta nokupakisha, imishini yokuhambisa amandla, imishini yensimbi njll.
I-HT250 yensimbi ephezulu yensimbi
I-20CrMnTi iron alloy
Ubulukhuni baphezulu kwamagiya
I-42CrMo iron alloy
Ukuqina / okukhipha shaft hardness
Imishini ngokunemba kwamagiya
ukugaya okunembile, i-6 ~ 5 Ibanga
I-GB L-CKC220-460, i-Shell Omala220-460
tempering, cementiting, quenching, njll.
I-94% ~ 96% (kuya ngesigaba sokuhambisa)
I-60 ~ 68dB
Isikhathi. ukuphakama (MAX)
Isikhashana ukukhuphuka (Amafutha) (MAX)
NSK, SKF noma I-China Top brand
I-brand of seal seal
I-CFW, NAK noma eminye imikhiqizo
I-R uchungechunge lwe-helical gear kupunguza, oluhlanganiswe nezidingo zobuchwepheshe zamazwe omhlaba, lunokuqukethwe kobuchwepheshe obuphezulu, longa isikhala, luthembekile futhi luhlala isikhathi eside, luyakwazi ukumelana namandla amaningi b, amandla afinyelela ku-132Kw, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza okuphakeme, ukusebenza kahle kwe-reefer kuze kufike kwi-95% ngaphezulu, Ukudlidliza okuphansi, umsindo ophansi, ukonga amandla amaningi, insimbi esetshenzisiwe esezingeni eliphakeme, umzimba webhokisi lensimbi, umugqa wegiya ngemuva kokubambana kanye nokucima, ukucacisa imishini, ukuqiniseka ukulinganiselwa komgodi kanye nezidingo zokubamba isikhundla, kwakha umshini wokujikisa umjikelezo womshini wegiya, nakho konke izinhlobo zama-motors akhiwa ngokuhlanganiswa kwe-elekthronikhi, aqinisekisa ngokuphelele ikhwalithi yomkhiqizo
Lolu chungechunge lwe-compact, heavy-task inline shaft helical gear-minimators luyatholakala ngokuncipha okukodwa, okuphindwe kabili, nokuphindeka kathathu. Ama-ukufakwa ahlukahlukene we-MODEL Flanges nge-Solid Input Shaft Couple eneMotor LHF LVF MHF MVF RXHF LHD LVD MHD. Sinikezela nge-high enembile ye-inline gear blockers ngenani eliphakeme. I-helical gear yethu ehlisa ihlinzeka ngokudluliselwa kwamandla okuthembekile kwe-applicationaton ejwayelekile njengokwelashwa kwamanzi, umshini wokupakisha ukudla, isigayo, isitshalo sikasimende, umgibeli wamayini.
Ukuchazwa kwemoto eyenzelwe lokhu:
I-helical gear reducer iyigiya lokunciphisa inoveli. Ukwamukela ukusebenza kahle, umqondo wokuqamba owedlule wohlelo lokuhlanganiswa kwemodyuli lunezimpawu zobukhulu obuncane, isisindo esikhanyayo, i-torque enkulu yokudlulisela, ukuqala okuzinzile, ukuhlukaniswa okuhle kwesilinganiso sokuhambisa, njll., Futhi kungaxhunywa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi nokufakwa okuhlukahlukene izikhundla. Yenziwe ngensimbi ye-alloy ephezulu ephezulu ene-carburizing ephezulu kanye nokwelashwa okuqinisayo. Inomthamo oqinile wokuqina nokuqina.
I-Helical gear reducer yenziwa ngokuhambisana nezidingo zobuchwepheshe zomhlaba wonke futhi inokuqukethwe okuphezulu kobuchwepheshe.
I-2, gcina isikhala, ithembekile futhi ihlala isikhathi eside, ngesikhundla esiphakeme sokulayisha, amandla afinyelela ku-132KW;
I-3, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza okuphakeme, ukusebenza kwe-minimer kukhulu njenge-95% noma ngaphezulu
Ukudlidliza okuphansi, umsindo ophansi nokonga amandla amaningi;
5, ukukhethwa kwezinto ezenziwe ngensimbi ezisezingeni eliphakeme, ibhokisi lensimbi lensimbi, indawo yegiya ngemuva kokwelashwa kokushisa okuphezulu;
Ngemuva kwemishini yokucacisa ukuqinisekisa ukufana komgodi nezidingo zomphathi wokuma, i-minimator eyakha umhlangano wokuhambisa wegiya nge-helical ifakwe izinhlobo ezahlukahlukene zemotor, ezihlanganiswa zibe yi-mechatronics, eziqinisekisa ngokuphelele izici zekhwalithi yemikhiqizo .
R uchungechunge igiya lokunciphisa idatha yezobuchwepheshe
imodeli Shaft Dia. Ukuphakama Kwesikhungo Ukukhishwa kweFlange Dia. Power lokubiza Kuvunyelwe iTorque Isisindo
Okuqinile (mm) (Mm) (Mm) (kw) (Nm) (KGS)
Isikhumbuzo: isisindo ngaphandle kwamafutha kanye ne-motor, shaft ne-flange okokufaka kungeza i-10%.
Ibhokisi le-Helical Gear ikwazi ukuqamba nezinye izinciphisi nezinye izinto ezingafani, uthole inani lokunciphisa isilinganiso nokushintshashintsha okukhulu. Ngakho-ke isetshenziswa ezindaweni eziningi zezimboni, njengezimayini zeMetallological, ukuphakamisa izinto zokuhamba, ukwakhiwa kwe-petrochemical, izindwangu, imvelo, ugesi okhanyayo, umshini wepulasitiki, imishini yokupaka nokunye.
I-Sogears R uchungechunge kanzima we-Helical helical gear minimator (igiya lokugaya eligcwele)
Uchungechunge lwe Isihlisi se-helical yakhelwe futhi yakhiwa ngesisekelo sohlelo lokuhlanganiswa olufana nalokhu. Kunezinhlanganisela eziningi zezimoto, amafomu wokufaka nezinhlelo zokwakheka. Isilinganiso sokudluliselwa silinganiswa kahle ukuze kuhlangatshezwane nezimo zokusebenza ezingefani, qaphela ukuhlanganiswa kwe-elekthronikhi, ukusebenza kahle kokudlulisela okuphezulu nokusetshenziswa kwamandla okuphansi. Ukusebenza okuphakeme. Igiya elingaphezulu lamazinyo enziwe ngensimbi ye-alloy yekhwalithi ephezulu, umphandle uqiniswa yi-carburizing kanye nokucima, amazinyo okugaya acutshungulwa kahle, ukudluliswa kuzinzile, umsindo uphansi, namandla okuthwala makhulu. Ukuphakama okushisa okuphansi nempilo ende. Kusetshenziswa kabanzi ezimbonini eziningi, ezinjengezinsimbi, ukwelashwa kwendle, amakhemikhali, amakhemikhali nakwezinye izimboni.
Ilungele amandla aphezulu
Idizayini yokuphila ende
Imodeli yokuzikhethela ye-R37-R167
I-RM yochungechunge i-minimer yenzelwe ngokukhethekile imishini yokuhlanganisa
Okwesihlanu: Izinhlaka zomkhiqizo:
I-torque yokuphuma: Kufika ku-18000N.m
Ijubane lokukhipha: 0.16-1028 RPM
Ifomu lokufaka: ukufakwa kwe-engeli engezansi / ukufakwa kwe-flange
Ukusebenza kahle kokudluliselwa: 2 (isilinganiso: 5-24.8): 96%, 3 (isilinganiso: 27.2-264): 94%
R: shaft-hlobo unyawo lukhuphuka i-RF: Ukunyuka kweFlange
I-R ... F: Izinyawo ezinyukayo ze-Range Flange: Ukukhwela kwe-Flange ngezindlu ezinwebekayo
I-RX: Isiteji esisodwa sonyawo sonyuka i-RXF: Ukunyuka kwesiteji esisodwa se-flange
Izinhlobo eziphambili ze-R uchungechunge oluqinile lwe-helical gear minimator yilezi:
R / RF17, R / RF27, R / RF37, R / RF47, R / RF57, R / RF67, R / RF77, R / RF87, R / RF97, R / RF107, R / RFX I-RF137
Izinhlobo eziphambili ze-R uchungechunge oluhlise ngokuqinile lwegiya elinamandla wesiteji esisodwa yilezi:
I-RX / RXF37, RX / RXF47, RX / RXF57, RX / RXF67, RX / RXF77, RX / RXF87, RX / RXF97, RX / RXF107, RX / RXXX
Siyakwamukela ukuthi ungithinte uma unentshisekelo ngomkhiqizo wethu.
Iqembu lethu lizokweseka noma yisiphi isidingo ongaba naso.
I-1 Q: Yimuphi umbono okufanele ngikutshele kuwo ukuze uqinisekise isinciphisi segiya?
A: Imodeli / Usayizi B: Amandla emoto C: Isivinini sokukhipha D: Isici sesevisi.
I-2 Q: Kuthiwani uma ngingazi ukuthi ngidinga ukwehlisa igiyeleliphi?
A: Ungakhathazeki, Thumela imininingwane eningi ngangokunokwenzeka, iqembu lethu lizokusiza ekutholeni lelo elilifunayo.
I-3 Q: Kufanele ngilinde isikhathi esingakanani impendulo ngemuva kokuthi ngithumele uphenyo?
A: ngaphakathi kwamahora we-12.
I-4 Q: Siyini isikhathi sakho sempi sokunciphisa igear?
A: Sinikeza unyaka owodwa wempi kusukela usuku lokuhamba komkhumbi lushiye iChina.
I-5 Q: Yiziphi izimboni ezisetshenziswa ekuhlolweni kwegiya lakho?
A: Amabhokisi ethu wegiya asetshenziswa kabanzi ezindaweni zesimende, ezendwangu, ukucutshungulwa kokudla, isiphuzo, imboni yamakhemikhali, i-escalator, imishini yokuzigcina ye-othomathikhi, i-metallurgy, i-tabacco, ukuvikelwa kwemvelo, Logistics nokunye.
6. Q: Ungalethwa kanjani:
A: Ngolwandle - Umthengi uqoka ukudlulisela phambili, noma iqembu lethu lokuthengisa lithole ukuhambisa okufanele abathengi.
Ngomoya - Umthengi unikeza ukuqoqa i-akhawunti ebonakalayo, noma iqembu lethu lokuthengisa lithole i-express efanelekayo yabathengi. (Kakhulu isampula)
Abanye - Sihlela ukuletha izimpahla endaweni ethile eChina eqokwe abathengi.
7. Uma ufaka i-oda, ithimba lethu lizoqinisekisa nawe ngombala, iphakethe, indlela yokukhokha kanye nokulethwa, khona-ke kuzothunyelwa isivumelwano sokuthengisa kuwe ukuqinisekisa.